Igumbi elikhanyayo nelinomoya kuMgangatho weBanbridge
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguAnne
UAnne unezimvo eziyi-48 zezinye iindawo.
Ilungele irenti yexesha elifutshane eli gumbi lilula nelinomoya eliphindwe kabini likumgangatho ongaphantsi wendlu yedolophu yanamhlanje kwindawo yokuhlala ezolileyo kwaye ineefestile zaseFransi ezikhokelela kwipatio engasese kunye negadi. Igumbi linegumbi lokuhlambela labucala elineshawari esecaleni kwegumbi lokulala kwaye kukho indawo yokupaka yabucala phambi kwepropathi.
Ngenxa yokuba kufutshane nombindi wedolophu kunye nendlela yemoto eyi-A1 ibonelela ngokufikelela ngokulula eBelfast, Dublin naseNewry kunye nezikhululo zeenqwelomoya ezintathu zamazwe ngamazwe.
Ipropathi yam ibekwe ngokulula kuphuhliso oluzolileyo kwimizuzu embalwa ukusuka kumbindi wedolophu kwaye ikufutshane neevenkile, iikhefi kunye neendlela zebhasi ezinendawo yokupaka yabucala. IBanbridge yidolophu ekufutshane ne-A1 enekhonkco ezithe ngqo kuzo zombini iDublin naseBelfast kunye nokufikelela ngokulula kwizikhululo zeenqwelomoya ezi-3, iBelfast International, iBelfast City kunye neDublin. Unxweme oluhle lwe-County Down kunye neendawo zalo ezintle ezibandakanya idolophu ethandekayo yolwandle yaseNewcastle apho idumileyo 'iiNtaba zaseMorne zitshayela elwandle' malunga nemizuzu engama-30 ukuqhuba. Ngokudityaniswa kwendawo entle kunye nokuba kufutshane kwesixeko le yeyona ndawo ifanelekileyo yekhefu elifutshane okanye umntu onqwenela ukuya eBelfast, eNewry okanye eDublin. Isaphulelo siya kusebenza kubhukisho lwexesha elide. Igumbi lineefestile zaseFransi ezivula ngqo kwipatio yabucala enelanga ukuze iindwendwe ziyonwabele ikomityi yazo yasekuseni okanye ziphumle nje. Izibonelelo zeti kunye nekofu zibonelelwe kwigumbi kunye nebhotile yamanzi.
Ipropathi ibekwe kwindawo ezolileyo-imizuzu embalwa yokuhamba ukusuka emlanjeni kunye nakumbindi wedolophu.
Ujoyine nge- 2012 Meyi
I'm Anne, I have recently retired and live in Banbridge, after having lived overseas for many years. I enjoy travelling, walking in the countryside, theatre, reading, eating out and spending time with friends.
Iindwendwe ziya kuba nesitshixo sazo socango lwangaphambili ukuze zikwazi ukuza kwaye zihambe ngokuzonwabisa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Banbridge